मगन्ते दल र नेताहरु | चितवन पोष्ट
गृह » मगन्ते दल र नेताहरु
मगन्ते दल र नेताहरु
मंसिर १० र २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको चुनावी सरगर्मी बढेसँगै राजनीतिक दलहरुले चुनावी खर्चको जोहो पनि आ–आफ्नै तरिकाले गर्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले आसन्न निर्वाचनका लागि खर्चको जोहो गर्न औपचारिक रुपमा कुनै पक्षलाई पनि अपिल नगरेको जनाएको छ । कांग्रेसको आर्थिक समितिले उद्योगी, व्यवसायीका साथै निकटका व्यक्तिहरुसँग आर्थिक संकलनका लागि पहल गर्ने गरेको छ । तर, नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा हुने चुनाव खर्च जुटाउन विदेशमा रहेका शुभेच्छुकहरुसँग रकम संकलन गर्ने भएको छ । चुनाव खर्चका लागि पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकबाट रकम संकलन गर्ने योजना रहे पनि प्रमुख स्रोत भने विदेशमा रहेका नेपाली नै देखिएका छन् । जसबाट एकसय अमेरिकी डलरदेखि एकहजार अमेरिकी डलर उठाउन पार्टी कमिटी परिचालन गरेको छ । खाडीका ८ देश, अमेरिकाका २२ राज्य र युरोपका २२ देशमा कमिटी बनाएको एमालेले ती देशबाट कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको देखिएको छ ।
निर्वाचनका बेला दलहरुले उठाउने खर्चको फेहरिस्त कहीँ कतै सार्वजनिक गरिएको पाइँदैन । स्थानीय तहदेखि विदेशका विभिन्न देशबाट वैध वा अवैधरुपमा प्राप्त हुने रकम कुनै पनि दलले खुलाउँदैनन् । पछिल्लो समय चुनाव खर्चको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नेता उम्मेदवार नै बन्न नसक्ने वा चाहना नगर्ने दृष्टान्त हरेक दलमा छन् । निर्वाचन आयोगले प्रतिउम्मेदवार प्रतिनिधिसभातर्फ रु. २५ लाख र प्रदेशसभामा रु. १५ लाख खर्चको सीमा तोकेको छ । ठूला भनिएका दलका उम्मेदवारले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाअनुसार खर्च भएको देखाउने गरिए पनि उनीहरुको खर्चको सीमा असीमित बन्ने गरेको कुरा कसैले छिपाउनु आवश्यकता छैन । चुनाव महङ्गो बन्दै गइरहेको र सामान्य आर्थिक अवस्था भएका उम्मेदवारले खर्चकै समस्याका कारण पछि हट्नुपर्ने नियति छ । जसले गर्दा राजनीतिमा आफ्नो सर्वश्व गुमाएका र निष्ठाको राजनीति गर्नेहरु पाखा लाग्नुपर्ने अवस्था छ ।
दलहरुले उम्मेदवारका खर्च जुटाउन स्वदेश र विदेशमा रहेका व्यक्तिसँग चन्दा मागेर चुनावी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आफैँमा लाजमर्दो स्थिति हो । किनभने, भड्किलो प्रचारप्रसार र पैसाको खोलो बगाएर गरिने चुनावी अभियानकै लागि मगन्ते बन्नुपरेको तथ्य दलहरुले मनन गर्न नसक्दा दलहरुका चुनावी खर्च असीमित बन्न पुगको हो । कुनै व्यक्ति तथा संस्थाबाट चन्दा लिँदा त्यो व्यक्ति तथा संस्थाले पनि केही न केही प्रतिफल चाहन्छ, चाहेको हुन्छ । सहयोग गर्नेहरुले दलहरुबाट गर्ने अपेक्षा मह¤वाकांक्षी हुन्छ । दलहरुलाई ठूलो रकम सहयोग गरेर समानुपातिकमा पर्नेहरु हुन् या दलहरुलाई सहयोग गरेका नामबाट व्यक्तिले गर्ने अपेक्षाबाट नराम्रो परिणाम ल्याउँछ । चुनावमा पैसाको खोलो बगाएर भन्दा जनताको ससाना समस्या पूरा गर्ने उम्मेदवारले बढी विश्वास जित्न सक्छ भन्ने कुरा दलहरुले मनन गर्नुपर्छ । चुनावमा खर्च गर्न देशविदेशमा श्रम गर्ने नेपालीबाट चन्दा अपेक्षा गर्नुभन्दा चुनावी खर्च घटाएर मतदाताको मन जित्नु अझै बढी प्रभावकारी हुनसक्छ । दलहरुले मगन्ते सोच र शैली परिवर्तन गर्नु जरूरी देखिएको छ ।
मृत्युलोक बन्दै मलेसिया
वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मानिएको मलेसियामा सन् २०१८ यतामात्रै ५४ जना...
प्रधानमन्त्री ! सक्ने कुरामात्र बोल
अघिल्लोपटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उनले व्यक्त गर्ने गरेका भाषणमा...
समन्वय अभावमा भूकम्पपीडितहरु
दल फेर्नेहरुको ताँतीलाई हेर्दा